တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု လျော့နည်း ပပျောက်စေရေး ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ရန် အစိုးရသို့ တိုက်တွန်းသ? - Yangon Media Group
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု လျော့နည်း ပပျောက်စေရေး ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ရန် အစိုးရသို့ တိုက်တွန်းသ?
တိုင်းပြည်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုများစွာ ထိခိုက်သော တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှု လျော့နည်းပပျောက်စေရေးအတွက် မဟာဗျူဟာချမှတ်၍ ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန် အစိုးရသို့ တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အတွင်းဆွေးနွေးရန် ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုလိုက်သည်။
သြဂုတ်၃၁ ရက် ပြည်သူ့လွှတ် တော်အစည်းအဝေးတွင် ကောလင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးဇော်အောင်က ယင်းအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လွှတ် တော်တွင်းဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်သင့်၊ မသင့်သဘောထားမေး မြန်းခဲ့ရာ ကန့်ကွက်သူမရှိသဖြင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ”မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတိုး တက်မှုနှောင့်နှေးနေရသည့် အဓိကအကြောင်းအချက်ကိုကြည့်ရင် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဟာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်”ဟုဦးမျိုးဇော်အောင်က အဆိုတင်သွင်းစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
နယ်စပ်ဒေသများမှ စိုက်ပျိုး ရေးသီးနှံများတရားမဝင် ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် တောင်သူများဒုက္ခ ရောက်ရကြောင်း၊ တရားမဝင်လူ သုံးကုန်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းစွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးမှုကို နှေးကွေးစေ ကြောင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်လုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာသုံးစက် ပစ္စည်းများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းများတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုများလာခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတ ကာစက်ရုံများဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းစေကြောင်းသိရသည်။ ”လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနေအထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ ကြည့်တဲ့အခါ အားရ စရာအခြေအနေမရှိဘူးဆိုတာ မြင်တွေ့ရပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
သွင်းကုန်ကဏ္ဍတွင်လည်း ဆောက်လုပ်ရေးသုံး၊ လူသုံးကုန်၊ အထူးကုန်စည်၊ ဆေးဝါး၊ ပုပ်သိုးနိုင် သောပစ္စည်း၊ ယာဉ်နှင့်ယန္တရား၊ စသည့်ကဏ္ဍများစွာသည်လည်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း အားကောင်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်ဟုသိရသည်။ ယခုအဆိုကိုတင်သွင်းရခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းက ”အဓိကက တော့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရမ်းထိခိုက်စေတယ်။ တောင်သူ လယ်သမားတွေ၊ မွေးမြူရေးသမား တွေအတွက် အများကြီးထိခိုက်စေတယ်။ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူကိုလည်း ထိခိုက်စေတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် တိုင်းပြည်အခွန်ရ ရှိမှုကိုလည်းလျော့နည်းစေပြီး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုမှသည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများလည်း ဖြစ်စေနိုင် ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ယနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အ စည်းအဝေးတွင် ဒဂုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်ခိုင်က မတူကွဲ ပြားသောသဘာဝရှိကြသည့် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းကြီးများကို သဘာဝအား ဖြင့် တူညီသောလုပ်ငန်းအလိုက်တူ ရာစုဖွဲ့ပြီး အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီနှင့်ဆီ လျော်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူဝါဒများချမှတ်၍ အားလုံးလွှမ်းခြုံ နိုင်သည့် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးစီမံချက်နှင့်မဟာဗျူ ဟာတစ်ရပ်ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန် အစိုးရသို့တိုက် တွန်းကြောင်းအဆိုအား တင်သွင်းခဲ့ရာ လွှတ်တော်တွင်းဆက်လက် ဆွေးနွေးရန်ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့သည်။
တိုင်းအစိုးရရောင်းချသော တန်ဖိုးနည်း/သင့် အိမ်ရာတိုက်ခန်း မဲပေါက်ပြည်သူများ ကနဦးငွေပေးသွ
အအေးပိုင်းဒေသမှ အပူပိုင်းဒေသသို့ ချက်ချင်းပြောင်းလာသူများ Heat Stroke ပိုဖြစ်နိုင်ဟုဆို